तरकारीको बीउको विकास गर्ने बारेमा सार्कस्तरीय बैठक शुरु
पुस ६, कास्की । सार्क राष्ट्रमा उच्च मूल्य श्रृंखलामा जाने तरकारी बीउको विकास गर्ने लक्ष्यसहित आइतवारदेखि पोखरामा तीन दिने सार्कस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक शुरु भएको छ । सार्क एग्रीकल्चर सेन्टर बंगलादेश र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा शुरु बैठकमा...
पुस ६, दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा निर्माण शुरु भएको केबुलकारको माथिल्लो स्टेशनमा स्तरीय होटल निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । होटल निर्माणका लागि आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले काठमाडौंस्थित चन्द्र निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको हो । २५ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्...
अण्डा बेचेरै मासिक १२ लाखको कारोबार
पुस ५, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटा, डाँडाथरस्थित ‘बलेवा बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक कृषि एन्ड पोल्ट्री फार्म उद्योग’मा अहिले चार हजार ६०० ‘लेयर्स’ जातका कुखुरा छन् । कुखुराले दैनिक चार हजार अण्डा दिन्छ । अण्डा बेच्दा मासिक रू. १२ लाखको कारोबार हुन्छ । एउटा अण...
म्याग्दीमा ‘फाइवर टु दि होम’ सेवा
म्याग्दी (अस) । नेपाल टेलिकमले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९, गलेश्वरबाट फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) सेवा शुरू गरेको छ । नेपाल टेलिकमले गलेश्वरमा बुधवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरीे भ्वाइस तथा डाटाका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको तामाको तार (कपर) प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा हटाएर फाइबर प्रविधिबाट सेवा शुभा...
ट्राफिक प्रहरी बागलुङको २० लाख ९५ हजार राजस्व संकलन
बागलुङ (अस) । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बागलुङले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा २० लाख ९५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म सवारीसाधनको कारबाहीबाट कार्यालयले उक्त राजस्व संकलन गरेकोे हो । चार महीना अवधिमा ३ हजार ५०० सवारीसाधन कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी...
हिलेखोला–जैमिनीघाट सडकको कालोपत्र शुरू
पर्वत (अस) । पर्वतको हिलेखोला–जैमिनीघाट सडक खण्ड कालोपत्रको काम शुरू गरिएको छ । २०७७ मंसिर २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी हिमदुङ एन्ड थोकर कम्पनी प्रालि काठमाडौंले उक्त सडक स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी पाएको छ । यसको कुल लागत १६ करोड ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कालोपत्र गरिने सडक खण्डको लम्बा...
१६औं लेखनाथ महोत्सव शुरू
कास्की । लेखनाथमा ‘१६औं लेखनाथ महोत्सव’ शुरू भएको छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा बिहीवारदेखि शुरू भएको महोत्सव पुस १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महोत्सवको उद्घाटन गर्दै समृद्धिका लाग...
गुणस्तरीय मह जापान निर्यात गर्ने तयारी
पुस २, वालिङ । यहाँ उत्पादन भएको महलाई जापान निर्यात गर्ने सम्झौता भएसँगै संकलन कार्य थालिएको छ । रेशम विकास कार्यक्रमले यहाँ उत्पादन भएको गुणस्तरयुक्त मह जापानस्थित कम्पनीमा निर्यात गर्ने सम्झौता गरेपछि संकलन थालिएको हो । रेशम विकास कार्यक्रम विसं २०४२ मा...
बागलुङको सिगानामा चौथो सुन्तला उत्सव हुँदै
पुस २,बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ८ सिगानामा चौथो सुन्तला उत्सव हुने भएको छ । सुन्तला जोनमा रहेको सिगानाको सुन्तलालाई व्यावसायिक रुपमा प्रवर्द्धन गर्दै बजारीकरणको उद्देश्यले पुस ४ देखि ९ गतेसम्म चौथो सुन्तला उत्सवको आयोजना गरिएको मुल आयोजक समितिका अध्यक्ष राम बहादुर खड्काले बताए ।...
एउटै बोटमा ४५० किलो सुन्तला !
पुस २, बागलुङ । यो त्यही सुन्तलाको बोट हो, जसलाई टोपबहादुर खड्काले ३९ वर्षअघि रोपेका थिए । चार दिन लगाएर गुल्मी, भाडगाउँबाट ल्याएको बोटमा योपालि ४५० किलो सुन्तला फल्यो । गाउँमा चलेको मूल्य अनुसार त्यही एउटै बोटले रू.२७ हजार कमाइ दियो । बजारसम्म आइपुग्दा सुन...